नेपाल आज | भुकम्प पीडितको पैसा हिनामिनाको विषयमा नेपाली जनसम्पर्क समितीमा ठूलै धक्का, महासचिवको यस्तो छ कुरा
भुकम्प पीडितको पैसा हिनामिनाको विषयमा नेपाली जनसम्पर्क समितीमा ठूलै धक्का, महासचिवको यस्तो छ कुरा
[caption id="attachment_10537" align="alignleft" width="256"] मुनेन्द्र नेम्बाङ, नेपाली जनसम्पर्क समितीका महासचिव[/caption]
हाम्रा सभापति आनन्द बिष्टले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण नियोजित ढंगले हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक चरित्र हत्या गर्नका निमित्त अति झुट तथ्यहिन गैर जिम्मेवारी भनाइहरु राखेका छन् संचारमाध्यममा । संस्थाको नेतृत्वले नै यसरी आफ्नो नैतीक धराताल नै भुलेर अत्तालिदै अरुलाई आरोप लगाउदैमा आफ्नो गल्ती छोपिन्छ र ? नेतृत्व जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । भुकम्प पीडितको नाममा उठाएको सहयोग रकम हाम्रो कारण अहिले मात्र अहिले सम्म सुरक्षित छ । अन्यथा यो रकम समितिको निर्णय बिना नै नेतृत्वले जथाभावी खर्च गरेर पहिल्यै सकाइसकेका हुन्थे ।
अहिले सम्म यो शिर्षकमा उठेको रकम सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्नु हाम्रो कम्जोरी होइन सभापतिको कमजोरी हो । अन्यत्र प्रयोग हुनबाट बचाएको सहयोग रकम हामी सित जति छ त्यो सुरक्षित राखिएको कुरा हामीले पहिल्यै प्रेस मिट बाट सबैलाई जानकारी दिएसकेका छौ । भुकम्प पीडितको नाममा उठाएको सहयोग रकमको हिना मिना हामीले होइन सभापतिले गरेका छन् । सभापतिले पचास हजार डलर जति लिएर नेपाल गएका थिए। त्यसको विल भरपाइ अहिले सम्म कार्यसमितिमा बुझाएको छैनन । अब मौखिकले मात्रा अब हुने वाला छैन । अन्य नगद सहयोग रकम पनि बिभिन्न ठाउँबाट सभापतिले लिएको बुझीएको छ त्यसको खोजी हामी गर्दैछौ । त्यस बाट बच्न अरूलाई आरोप लगाउन लागी परेका छन् अहिले सभापति । विधिको शासन भएको देश अमेरिका सबैले यहाँको कानुन मानु पर्छ क्यास सहयोग रकम लिएर नेपाल जाँन हुदैन भनेर हामीले भनेका थियौ । तर लगभग ४३ हजार सातसय ६३ डलर नगद लिएर सभापति राहत बाँड्न आतुर हुनुभयो । जसले गर्दा अमेरीकन कानुनको नजरमा हाम्रो संस्था अहिले समस्यामा छ ।
उहाँ आफै पनि समस्यामा पर्न सक्नुहुनेछ । यो एउटा गम्भीर बिषय हो । म संगठनको महासचिव हुँ । म संग चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार मात्र छ निकाल्ने होईन । जतिवटा चेकमा मैले हस्ताक्षर गरेको छु सभापतिलाई जानकारी गराउँदै संगठनको कामका लागि गरेको छु। र त्यसको कारण र जिम्मेवारी म दिन सक्छु । जुन १४, २०१५ वसेको कार्य समितिको बैठकले संगठनलाई गैर नाफामुलक सँस्था बनाउन जिम्मेवारी महासचिव र कोषाध्यक्षलाई दिईएका कारण चेकमा मेरो सही परेको छ । मेरो हस्ताक्षर ६ वटा चेकमा मात्र परेको छ ।
सभापति र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर १७ वटा चेकमा छ । त्यो १७ वटा चेकमा सही गर्दा कुन कुन मितिमा समितिको बैठक वोलाएर अनुमोदन गरिएको छ ? म संस्थाको महासचिव मलाई माईनट लेखेको थाहा छैन । आफु नाङगै बसेर अरूलाई किन लुगा नलाएको भन्नु लाजमर्दो कुरा मात्रै होइन र ?
हाम्रो संस्था विवादित भएकोले संस्थाको रकम को संग रहने भन्ने नै अहिलेको हाम्रो समस्याको चुरो हो । त्यसैले हामीले पनि छुट्टै आर्थिक हिसाव किताव सम्बन्धमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँन केन्द्रीय सदस्य किलन राईको संयोजकत्वमा एउटा छानविन समिति बनाई ५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएका छौ । समितिले प्रतिवेदन बुझाए पछि त्यसको आधारमा कारवाही अगाडी बढ्ने छ । यो छानविन समितिले जसलाई दोषी ठहर्याउँछ त्यसलाई कारवाही हुन्छ । मलाई दोषी भेटीएमा कारवाहीको भागीदार हुन म तयार छु । एउटा पार्टीको रोवरमा निस्पक्ष छानविन कमिटी वनाई सत्य तथ्य बाहीर ल्याई दोषिलाई कारवाही गरेर संगठनलाई गति दिनु पर्छ । यो सबैलाई मान्य हुनेछ ।